Wall စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်း
ဒီတပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ နံရံ (Wall) ကို အခြေခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ A fly on the wall, Walls have ears နဲ့ Drive me up the wall တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) A fly on the wall
A (တစ်ခု၊ တစ်ကောင်)၊ fly (ယင်ကောင်)၊ on (အပေါ်မှာ)၊ the wall (နံရံ) ဆိုတော့ ဒီစကားစုရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နံရံပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ယင်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နံရံပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ယင်ကောင်တစ်ကောင်ကို အများအားဖြင့် လူတွေက သိပ်သတိမထားမိသလို၊ ရှိမှန်းတောင် သိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် I want to beafly on the wall ဆိုတာက အခြေအနေတစ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ချင်၊ ကြားချင်၊သိချင်ပေမဲ့၊ အဲဒီနေရာကိုသွားဖို့က မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်၊ တနည်းလူသိခံလို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်၊ နံရံပေါ်မှာ နားနေတဲ့ ယင်ကောင်အသွင် ဖြစ်ချင်လိုက်တာလို့ တင်စားပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သူများပြောဆိုနေတာ ၊လုပ်နေတာတွေကို လူသိမခံဘဲ ခိုးကြည့်၊ ခိုးနားထောင်တဲ့ ဆန္ဒဖြစ်မိတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ မြန်မာမှာတော့ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီးတခုခုကို ကိုယ်တိုင်မြင်ချင်၊ကြားချင်တဲ့ ဆန္ဒဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
I wish I could beafly on the wall when John tells his boss he is quitting!
John က သူ့ဆရာသမားကို သူ အလုပ်ထွက်တော့မယ်လို့ ပြောတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အဲဒီနေရာမှာရှိချင်လိုက်တာဗျာ။
(၂) Walls have ears
Walls (နံရံတွေ)၊ have (ရှိတာ)၊ ears (နားရွက်တွေ) ဆိုတော့ ဒီစကားစုရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က နံရံတွေမှာ နားတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ နံရံတွေမှာ နားမရှိပေမဲ့ လူတဦးပြောနေတာ၊ လုပ်နေတာကို တခြားလူတွေက တိတ်တိတ်ကလေး ခိုးနားထောင်တယ်၊ သူများတွေလည်း ကြားနေရတယ်၊မြင်နေရတယ်ဆိုရင် “Walls have ears .“ ရယ်လို့ အရိပ်အမြွက်ပြောဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က မကြားဘူးမထင်နဲ့ သူများတွေလည်း ကြားနေရတယ်ဆိုတာကို ကာယကံရှင်ရိပ်မိအောင်နောက်တဦးကသတိပေး ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
David be careful what you say! Walls have ears!
David ရေ၊ မင်းပြောတဲ့ စကားတွေကို သူများတွေလည်း ကြားနေရတာမို့ သတိထားပြောနော်။
(၃) Drive me up the wall
Drive (တွန်းပို့တာ၊ မောင်းပို့တာ)၊ me (ကျနော်၊ ကျမ)၊ up (အပေါ်)၊ the wall (နံရံ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နံရံပေါ်ကို တွန်းပို့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံရံပေါ်ကို ပြေးတက်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလူတဦးကို စိတ်တိုစေတာ၊ ဒေါသထွက်စေတာ၊ သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်စေတာကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှာ စိတ်ပျက်လွန်းလို့ ထွက်ပြေးချင်စိတ်တောင်ပေါက်လာပြီ၊ ရူးချင်စိတ်ပေါက်လာပြီလို့ ပြောတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Stop nagging! You’re driving me up the wall!
လာပြီးဂျီမတိုက်နဲ့ ၊ စိတ်ကုန်လို့ ထွက်ပြေးချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ Idioms အသုံးတွေက A fly on the wall, Walls have ears နဲ့ Drive me up the wall တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။